Kuthinteke nendodana kaSfiso Ncwane ngokushona kukaLundi | News24
Kuthinteke nendodana kaSfiso Ncwane ngokushona kukaLundi
Johannesburg – Indodana yesihlabani somculi wokholo esisanda kudlula emhlabeni, uSfiso Ncwane, nokuwuNgcweti Ncwane, isinikele enkundleni yezokuxhumana, i-Instagram, nalapho ibidlulisa khona umyalezo ngokudlula komunye umculi womculo wokholo kwakamuva, uLundi Tyamara.
Emyalezweni wokukhumbula lo mculi, uNgcweti ubhale ukuthi: “Malume Lundi, ukushona kwakho kubuyisele emuva uhlelo lokulapheka kwethu ikakhulukazi umama.”
OLUNYE UDABA:Kusenzima emndenini kaLundi ukwamukela isimo - Umbiko
Kulo myalezo obumfishane, uNgcweti uphinde wabonga uLundi ngokusiza ububa wakhe ukuze akwazi ukungena kule ndima yomculo.
“Ngiyabonga ngokuvumela uNkulunkulu ukuthi akusebenzise ukuze wethule ubaba endimeni, ubaba wayehlale esitshela udaba [ngokuthi] wasiza kanjani ulalela i-demo yakhe. Ubusuku obuhle malume ngithandazela [ukuthi] uphumule ngokuthula njengobaba."
Funda umbhalo wendodana kaSfiso Ncwane, uNgcweti, ngezansi:
Uncle lundi, your passing has reversed our healing process especially mom. Thank you for allowing GOD to use you to introduce dad to the industry, dad always told us the story how you helped to listen to his demo. Good nite uncle i pray you rest peaceful just like dad #gospelrealsupersters ????
A photo posted by @ngcwetincwane1 on Jan 28, 2017 at 10:55pm PST